Muxuu ka yiri Pep Guardiola heshiiska uu Eden Hazard ugu biiray Real Madrid?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Pep Guardiola heshiiska uu Eden Hazard ugu biiray Real Madrid??
(Yurub) 12 Juunyo 2019. Macalinka reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay heshiiska uu dhawaan Eden Hazard ugu biiray Real Madrid.
Pep Guardiola ayaa amaanay talaabada uu Eden Hazard kaga dhaqaaqay Chelsea isla markaana uu ugu biiray kooxda Real Madrid, isagoo sheegay inay tahay talaabo muhiim u ah xiddiga reer Belgium iyo horyaalka Spain oo dhan.
Guardiola oo ka hadlay heshiiska uu Hazard ugu biiray kooxda Real Madrid ayaa yiri:
“Waa heshiis aad u wanaagsan, horyaalka Premier League iyo kooxda Chelsea waxay lumiyeen ciyaaryahan cajiib ah”.
“Ma ahan kaliya Real Madrid, kubadda Spain waxay heshay ciyaaryahan weyn, waxay ku raaxeysan doonaan inbadan, waa heshiis aad u fiican”.
Yeelkadeeda, Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday 7-da bishan inay dhammaystirtay heshiiska Eden Hazard, kaasoo ku heyn doona Los Blancos mudo 5 xili ciyaareed ah, ilaa iyo dhamaadka bisha June 2024.
Inkastoo qiimaha heshiiska aan si rasmi ah loo shaacinin, hadana saxaafada gudaha dalka Spain ayaa soo warisay in Real Madrid 100 milyan euro ay ku bixisay heshiiska Eden Hazard.
RASMI: Manchester United oo dhameystirtay heshiiska Daniel James
Xulka qaranka gabdhaha Germany oo guul muuhiim ka gaaray dhiggooda Spain kulan ka tirsan Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO